‘Mihoatra noho ny azo ihafiana ianareo’ · Global Voices teny Malagasy
Torohevitry ny mpanoratra iray ho an'ireo afa-panadinana hidirana ambaratonga faharoa tao Trinidad&Tobago
Voadika ny 30 Septambra 2021 18:53 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Swahili, Français, English
Latabatra ao an'efitrano fianarana; sary tao amin'ny Flickr an'i Jack Sem, CC BY 2.0.
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Tamin'ny 9 Septambra, azon'ireo mpianatra manerana an'i Trinidad sy Tobago ny vokatry ny fanadinana hidirana ambaratonga faharoa, Secondary Entrance Assessment (SEA) natrehan'izy ireo—fitsapàna manana lanja be hamaritra izay sekoly ambaratonga faharoa hivantanan-dry zareo. Nanodidina ny 19.645 teo ireo mpianatra niatrika ny fanadinana 2021, nefa voafetra ny toerana any amin'ireo sekoly “malaza”, ka dia henjana ny fifaninanana. Fanampin'izay, noho ny ankamaroan'ireny sekoly ireny eo ambany fitantanana antokom-pinoana, misy ny fifanekena—ny Concordat—izay manome zo an'ireo sekoly ireo hifantina 20 isanjato amin'ireo ankizy vaovao hiditra any amin'ireo sekolim-pinoana, tsy miankina amin'izay zavabita.
Hatry ny ela ilay rafitra no efa nokianina ho mitanila sy mifanohitra amin'ny lalantsaina momba izay fomba tokony hianaran'ny ankizy. Tao amin'ny Facebook, ny mpanoratra, Shivanee Ramlochan, izay nanana ny adiny manokana ihany koa tamin'ny rafitry ny fampianarana ao amin'ny firenena, dia nizara ny eritreriny momba ilay fanadinana. Navelany hamerina hamoaka an-kalalahana azy ireny eto ambany izahay:
Mpianatra mafy hatoka aho fahiny.
Na nanana fahaizana sy fironana tamin'ny kanton'ny fiteny aza aho, betsaka amin'ireo zavatra nodiaviko tany an-tsekoly fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa no tena nahasorena sy nibahana ahy tanteraka. Tsy nanampy ahy io, tamin'ireo fitsipika famaizana, mitodika any amin'ny fanalàm-baraka nataon'ny betsaka tamin'ireo mpampianatra ahy sy ny mpitantana tao an-tsekoly. Somary voajanahary ihany, izaho dia tanora somary lasa aloha ary angamba nanambony tena, saingy tsy dia misy iavahana loatra, ny fahatsiarovana tena ratsy indrindra ho ahy dia ireo mpampianatra — antitra, hendry, voky traikefa — nandatsaka tsy nisy indrafo ny ranomasoko.
Izany hoe: talohan'ny nahafahany nivelatra dia nisy firehetampo vitsivitsy montsana tao anatin'ny vatana amam-panahiko tao, dona mivantan'ny fomba nanabeazana ahy. Tsy manome “tsiny” aho eto; ny mifanohitra amin'izany aza, ny faharesena lahatra tamin'ireo hetsika sasantsasany taloha dia vao mainka nanamafy ny hetahetako hanokan-tena misimisy kokoa amin'izy ireny amin'izao fotoana izao. Kanefa, toy ny efa mahazatra ahy, tamin'ny andro namoahana voka-panadinana S.E.A./Common Entrance, tsikaritro fa tsy afaka ny hangina aho manoloana ny zavatra andrasana, matroka sy manafay ary mamoritra, izay apetratsika amin'ireo tanora eto amin'ny firenentsika.
Hameno ny gazety androany ny anaran'ireo “sangany namiratra indrindra”, ankizilazy sy vavy manao solomaso sy diboky ny hafaliana mitazona ireo filazam-pahaizany, ireo ray aman-dreny mpanohana eo amin'ny andaniny sy ankilany, mariky ny hasambaran'ny mpianakavy. Horesahan'ireo izay tafita irony alina lavabe niaretan-tory teo anilan'ny boky fianarana, ny anjara toeran'Andriamanitra, ny badminton sy ny filomanosana niaraka tamin'ireo raikipohy sy ny fanadinana. Hoderaina ry zareo, ary tsy fikasako ny hanaisotra na dia zavatra bitika amin'izany tsy ho an-dry zareo.
Betsaka androany ireo ankizy hahatsiaro tena ho fadiranovana, hitazona eny an-tanany ny taratasy milaza fa tsy nahomby izy ireo tamin'ny safidy voalohany, faharoa, fahatelo na fahefatra nataony. Angamba, tena “tsy nahomby” tokoa izy ireo. Hitomany ny ray aman-dreny, hikiakiaka, na hikapoka azy ireo mandra-paha tsy tsapany intsony na mitomany noho ny kapoka ireo, na noho ny fahabangam-pitiavana tsapan'izy ireo. Ny namany hijery an-dry zareo amim-pitserana sy fahamaivamaivànana satria tsy eo amin'ny toerana tena mampahonena tahaka izany. Ho toy ny hazina be ny fiainan-dry zareo ka mety hanimba tena mihitsy ny sasany, hanamaivana ny tany tsy hovesaran'ny henatra avy aminy. Ary ireny ireo ankizy iriako ho azoko tolorana ny zavatra rehetra, ny fahazoana antoka, ny fahatokiana, ny finoana ny heriny sy ny fampanantenany.
Androany, ary isaky ny Andro Famoahana Voka-Panadinana, tiako raha mba misy loka sy fanasongadinana pejy voalohany ho an'ireo ankizivavy mirehareha fa nahafeno hatramin'ny farany ny taratasim-panadinany amin'ity indray mitoraka ity, na izay ankizilahy, nahatakatra ny fanontaniana fahazoan-dahatsoratra tena sarotra takarina indrindra, nony farany, na dia tsy tafitany aza ilay ampahany. Ho an'ireo mpianatra nisaina fa mety tsy ho tafitra, faly fotsiny fa voafantina hiditra amina kolejy “tsy malaza”, saingy kolejy tena mandrisika tsara mahafaoka be tokoa. Ho an'ireo zaza kambana tsy mba nihevitra ny hiditra amin'ireo sekoly malaza fa naniry fotsiny ny hianatra amin'ny dingan'ny ambaratonga faharoa any akaikin'ny misy azy, misy tokotany malalaka be rakotry ny bozaka ahafahan-dry zareo milalao baolina sy cricket. Mendrika an'ireny ankizy ireny ny fideràna. Tsy misy tokony hitafy henatra, na izay aza, izy ireny.
Ireo filàna henjana, sy amin'ny endrika fanandevozana vaovao misy amin'ny rafitra antanan-tohatra akademika eto Trinidad & Tobago dia mametraka làlan-tokana— iray izay hety sy tsy misy indrafo— ho an'ny ankizy mba “ho tafita”. Apetrany fa raha tsy mandeha amina sekoly garabola “tsara” ianao, sekoly ambaratonga voalohany tsara, ambaratonga faharoa lafatra, “mahazo” vatsimpianarana ary mivoaka any ambadik'io fonon-tanana mandreraka io ary lasa mpitsabo, na mpisolovava, na -farafaharatsiny rehefa tsy ireo roa irao -injeniera, raha izay no làlana ho anao, dia tsy mendrika anao ny dera rehefa eo an-databatry ny fianakaviana amin'ny andro Krismasy. Tsy ilaiko akory ny miteny aminareo rehetra hoe maharary izany. Kanefa, betsaka aminay no nobeazina tamin'izany fomba izany, ka na nofikirinay ilay peratra varahina, na navelanay hilatsaka tanteraka.
Maniry mafy aho rafi-panabeazana iray manome lanja marina ireo faharanitantsaina marolafy, sy fiarahamonina iray tohanan'ireo trano famoahambaovao ary ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakàna izay, raha ny marina, ankalazain'ny asany. Te-hilaza aho amin'ireo ankizy mahatsapa ho ketraka sy trotraky ny alahelo, eo am-pahitàna ireo namany mandeha any amin'ireo tranon-drelijiozy sy ireo kolejy, hoe ny zavatra tsara indrindra azon'izy ireo atao eo amin'ny fiainany dia izay zavatra manome azy ireo hafaliana midedadeda, ary tsy ilàna resaka fikorianan-drano anaty vatan'olombelona izany; fa raha ny marina, fikorianan-drano anaty trano fidiovana, raobine ary fanasàn-dovia. Hoe ny fiainana iray tsy misy boky fampianarana hadalàna sy tsy misy mpisolovava dia tsy avo lenta, tsy marani-tsaina kokoa na tsara kokoa noho ny iray izay, mba ho fampidirambola, anamboaranao mofomamy manaraka lohahevitra anehoana ireo maherifo, na fanamboarana hajia ho an'ny paositra, na hamilianao fiara vaventy mitety ireo fiolahana saropady sy ireo làlana feno lavadavaka manerana ny nosintsika, amim-pahakingàna sy tsy misy tomika, na mamorona endrika tontolo tonga lafatra ambonina hazo fisaka feno fantsika, voahosotra verinia.
Avy amin'ireny fahaizamanao rehetra ireny no nanamboarana ny firenentsika. Miainga avy amin'ny fanangonana fako mankamin'ny fikarakarana zaridaina, mandalo amin'ny fandidiana antitra, ilaintsika izy rehetra. Sa aleontsika T&T iray misy mpitsabo-mpisolovava-injeniera mifampivandravandra, tonga amin'ny fotoana hitsaboana ny ‘carburateur’ iray, hitsidihana teatra, hamakiana tantara foronina, hametrahana ‘climatiseur’, hisidinana ho ao Tobago na hamakiana vato ao ambanin'ny tany?
Ho an'ireo ankizy mahatsapa fa tsy nahomby:
Tsy hoe tsy nahomby ianareo. Na dia tsy tafita tamin'ilay fanadinana aza ianareo. Tsy hoe tsy mendrika. Tsy hoe tsy mahay na inona na inona. Tsy hoe tsinontsinona.
Samy tompon'izao tontolo izao, na ianareo, na ny hafa.
Mbola olona mamiratra hatrany sy hamiratra mandrakariva ianareo, afaka manana fahaizamanao tsy misy fetra.
Ary ‘eny’, manome toky aho, mihoatra noho ny azo ihafiana ianareo.
Angona tononkalon'i Shivanee Ramlochan, Fantatry ny Rehetra Fa Manelohelo Aho, voafantina hifanintsana hahazo ny loka Felix Dennis 2018 ho an'ireo angona santatra tsara indrindra.